Sida loo Delete Songs on macruufka 6 mar
> Resource > macruufka > Sida loo Delete Songs on macruufka 6 ee Marka
Ka dib markii ay qaadan ah iPhone, iPad ama iPod, waa in aad rabto in aad soo dhoofsadaan songs in ay, si aad u awoodaan in ay mar walba iyo meel walba oo iyaga ku raaxaysan tahay. Syncing music aad iPhone, iPad ama iPod waa u fududahay. Laakiin, haddii aad dooneyso in aad tirtirto music ka qalab macruufka ah, waxaad ka heli doontaa dhibaato. Apple oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad tirtirto mid song waqti. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aad leedahay 1,000 oo gogo 'oo music, aad leedahay si aad iyaga tirtirto la tallaabo la mid ah 1,000 jeer. Dabcan, aad tirtiri kartaa playlist dhan. Iyadoo taxadar la'aan, waxa kale oo aad tirtirto laga yaabaa in heesaha aad jeceshahay in playlist ah.
Sida xaqiiqadu, waxaa jira hab fudud oo aad u tirtiri kartaa ma aha oo kaliya in aad heeso rabin mar, laakiin sidoo kale sii music aad ugu jeceshahay. In aad qaadato sidan, waxaa idinku waajib ah inaad kala soo baxdo Saaxiibkiis Lugood si gaar ah loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod - Wonderdshare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Sida macruufka ah tababaraha dhamaystiran, waxaa awood aad tirtirto heeso ka macruufka 9/8/7/6 si fudud oo dhaqso. Haddii aad rabto in aad tirtirto playlists badan oo aan loo baahnayn, waxay fududaysaa in aad si deg deg ah iyaga iyo sidoo saarto.
Labada qeybood oo si fiican u shaqeeyaan si ay u soo saarto heeso ku saabsan iPhone, iPad iyo iPod. Halkan, waxaan qaadi Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) sida tusaale. Wonershare TunesGo (Mac) shaqaysaa si la mid ah.
Tallaabooyinka Easy in ay tirtirto songs on macruufka 9/8
Download iyo rakibi this Lugood Saaxiibkiis muhiim u ah iPhone, iPod iyo iPod si aad u computer. Markaas, raac qaybta hoose si aad u maraan tallaabooyinka ..
Tallaabada 1. Connect macruufka qalab si computer ka dib markii tababaraha ku rakibidda
Si aan ku bilaabo, abuurtaan TunesGo on your computer by double-magcaabo Wondershare file TunesGo.exe. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone, iPad ama iPod in computer. Markaas dhammaan xogta ku saabsan iPhone, iPad ama iPod lagu soo bandhigi doonaa khaanadda bidix ee kooxda ee suuqa hoose.
Fiiro Gaar ah: Waxa muhiim ah oo loo baahan yahay si aad u soo dejisan iyo rakibi Lugood on your computer ka hor ay ka saareen music ka iPhone, iPad ama iPod.
Tallaabada 2. Delete music on macruufka 6
Hadda, in ay tirtirto music, waa in aad riix "Media" tab inay soo qaadaan suuqa kala warbaahinta. Guji "Music", badhanka ugu horeysay ee line ugu sareeya. Daaqadda maamulka music, heeso dooran in aad rabto in aad tirtirto, ka dibna riix "Delete". Hubi in aad iPhone, iPad ama iPod xiran yahay si aad u computer waqtiga oo dhan.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u la jaan qaada dhamaan noocyada qalab macruufka ah, sida iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPod xiriiri 5 iyo iPod xiriiri 4. Riix Tech Spec si ay u helaan Macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad rabto in aad tirtirto playlists, guji "playlist". Daaqadda playlist ah, doortaan playlists in aad rabto in aad tirtirto oo guji "Delete".
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad saaro music ka qalab macruufka ah oo bilaash ah ilaa meel. Marka laga reebo la tirtiro music, waxa kale oo aad kartaa in aad tirtirto sawiro kala duwan oo ku saabsan arrimo aad , masixi filimada badan, oo ka saari xiriirada ku yaal.
Video ku saabsan tirka songs on macruufka 9/8